“Alxamdulilaah Ilaah ayaa Maanta na bad-baadiyay.”.- Ciyaartooy badan oo ka bad-baaday Xasuuqii New Zealand loogu geystay Muslimiin Masjid ku cibaadeysanaysa….(Sidee wax u dheceen!!?) – Gool FM
“Alxamdulilaah Ilaah ayaa Maanta na bad-baadiyay.”.- Ciyaartooy badan oo ka bad-baaday Xasuuqii New Zealand loogu geystay Muslimiin Masjid ku cibaadeysanaysa….(Sidee wax u dheceen!!?)
(Christchurch) 15 Maarso 2019. Ciyaartoy badan oo Muslimiin ah ayaa ka bad-baaday xasuuqii New Zealand loogu geystay Muslimiin ku cibaadeysanaysa Masijd ku yiilay magaalada Christchurch ee dalkaasi.
Xulka qaranka ciyaaraha cricket-ka ee Bangladesh ayaa ku soo jeeday oo ku soo dhawaa Masjidka Al Noor si ay ugu cibaadeystaan ka hor inta uusan xasuuqa ka dhicin.
Ciyaartoyda iyo shaqaalaha xulka Bangladesh oo ku soo hadlay baraha bulshada ayaa sheegay inuu ilaah ka bad-baadiyay xasuuqa loo geystay umadii islaamka ee ku cibaadeysanayay masjidka ay ku soo jeedeen waxayna dadyowga islaamka ah ka codsadeen in loo soo duceeyo.
Kulanka heerka caalami ee ciyaaraha Cricket-ka ee dhex mari lahaa New Zealand iyo Bangladesh ayaa la baajiyay kaddib dhacdadan.
49-ruux oo Muslimiin ah ayaa dhimatay halka ay 20 kale ka soo gaareen dhaawacyo kaddib markii argagixiso islaam dhaceyb ah weerar ku qaadeen labo masjid oo ku yiilay Christchurch iyagoona xabad la dhacay qof kasta oo masjidka ku jiray ama banaankiisa taagnaa.
Ciyaartoyda xulka Bangladesh iyo waliba shaqaalaha ayaa soo saarnaa bas si ay u soo gaaraan Masjidka xasuuqa loogu geystay Muslimiinta si ay ugu cibaadeystaan Masjidka Al Noor kaa oo ku dhawaa bartanka magaalada Christchurch wuxuu sidoo kale u dhawaa Hagley Oval oo ah halka ay kula ciyaari lahaayeen Xulka New Zealand.
“Alxamdulilaah, Ilaah ayaa na bad-baadiyay maanta markii xabadaha lala dhacay masidka ku yaala Christchurch , aad ayaan u nasiib badanahay…. marna ma doonayo inaan arko waxyaabahan oo markale dhacaya…. Noo soo duceeya,”. Mushfiqur Rahim oo ka mid ah ciyaartoyda xulka Cricket-ka Bangladesh ayaa sidaa ku soo qoray bartiisa Twitter ka.
Daawo Goos-gooska saxiixa cusub ee kooxda Real Madrid Eder Militao
Difaac ka tirsan kooxda Barcelona oo Albaabada u furay inuu ku biiro xagaagan Manchester United